Kedu ihe bụ isi ihe nyocha njikwa search chọrọ n'aka ndị ọchụnta ego?
N'ezie, ime mkpebi bụ ihe bụ isi na-edekọ akara n'etiti ọganihu azụmahịa na njedebe zuru ezu. N'ezie, ịzere nsogbu ndị kachasịsịsị bụ ihe njikwa nyochacha njirimara chọrọ site n'aka ọ bụla smart online entrepreneur. N'ụzọ dị otú ahụ, n'iji usoro ziri ezi mee ihe ị nwere ike inwe obi ike na ị na-arụ ọrụ azụmahịa. N'ihi ya, a ga-eme ka ibe weebụ gị dị elu site na ụba ndị ahịa na-abawanye na ihe ndị na-emekarị mgbe niile. O doro anya, nke a ga - eme ka ị kwụọ ụgwọ nleta ugboro ugboro na ụlọ akụ gị ma hapụ ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ na - amụmụ ọnụ ọchị. Nke a bụ ihe anọ dị mkpa njikwa njikwa search chọrọ n'aka gị.
Nchọpụta nyocha nke saịtị
N'agbanyeghị okwu SEO dị karịa onye a ma ama, ọtụtụ n'ime anyị na-eleghara isi okwu ahụ anya. M na-ekwu ebe a usoro njikarịcha na saịtị, nke a na-ezube iji nyefee ebe nrụọrụ weebụ gị ka ọhụụ dị mma site na ịmepụta ma ndị ezigbo ọrụ, na njikwa nyocha nke nyocha. A na-emekarị ọrụ nyochaa na saịtị site n'ịrụ ọrụ ịhọrọ isiokwu kachasị mma, mkpụrụokwu okwu, na ihe dị iche iche dị ka mkpado, arịlịka, wdg.Mgbe ha mere nke ọma, ha ga-enyere Google aka ịghọta ọdịnaya weebụ gị ma ọ bụrụ na ọ dị mma - nyefee weebụsaịtị gị na ọkwa dị elu na listi nsonaazụ ọchụchọ.
Nke a na-emetụta usoro nke inweta ọkwa dị elu site na ụzọ ndị ọzọ nke njikarịcha ọchụchọ. N'ụzọ doro anya, nchịkọta njirimara site na saịtị bụ nnọọ ihe dị iche nke omume na-eme ka Google ghọta akwụkwọ weebụ gị na nke kachasị mkpa, nwee ikikere, ya mere o yikarịrị ka a ga-atụ aro ya nye ndị na-achọgharị ihe.Ọtụtụ mgbe, ikike nke weebụsaịtị na-ekpebisi ike site na ọnụ ọgụgụ na ngwongwo ndị dị mma nke backlinks dị elu na-ejikọta ibe weebụ gị na ndị kachasị mkpa na ndị ruru eru na Web. N'ụzọ dị otú ahụ, nyochaa njikwa search engine na-achọ ka a na-akpọkarị mkpokọta weebụ gị na isi ihe ntanetị n'ịntanetị, mkpokọta blog, na ụzọ dị iche iche nke mgbasa ozi ọha na eze.
Nkọwa a pụtara na njikwa njikwa search engine nke ọma na nke bara uru na-achọ iji usoro iwu kwadoro na ntụziaka nke Google. Iji mee nke ahụ, idebe setịpụrụ iwu White-Hat SEO, ị nwere ike ijide n'aka na ị na-ebugharị ụgbọ okporo ígwè ndị mmadụ karịa na ebe nrụọrụ weebụ gị, n'ikpeazụ na-akpata ọkwa dị elu na ndepụta Google nke SERPs (Search Result Pages). Nke a bụ ihe mgbochi nke White-Hat SEO: nyochaa nyocha ọchụchọ nke ọma, ide ihe dị mma, na inweta nanị njikọ njikọ anụ ọhịa.
Nke a na-abịa n'akụkụ gbara ọchịchịrị nke njikarịcha ọchụchọ. Usoro a na-eziga nanị na ihe ndị na-akwadoghị iwu, Otú ọ dị, na otu nzube ahụ dị ka White-Hat SEO mbụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ọgwụ ọjọọ na-emetụta ihe omume ndị a: mkpokọta nri, swapping web pages, iji ihe ederede zoro ezo, ịmepụta njikọ njikọ adịgboroja, iji akwụkwọ ọnụ ụzọ, na ihe ndị ọzọ.
Iwere okwu ole na ole maka nkwubi okwu, enwere m ike ịsị na njikwa njikwa search engine na-achọ iji njikwa dị nkọ nke usoro ọrụ atọ dị n'elu.Nanị ihe i kwesịrị izere na-efu bụ Black-Hat SEO. Ee, ha nwere ike na-ekwe nkwa ịnweta uru ngwa ngwa na okporo ụzọ. Ka o sina dị, ị na-etinye maka atụmatụ ọ bụla gbara ọchịchịrị maka ebe nrụọrụ weebụ gị ga-ejedebe na Google na-arụsi ọrụ ike, n'oge na-adịghị anya Source .